सामाजिक व्यापार, शान्त क्रान्ति | Martech Zone
सोमबार, मार्च 19, 2012 मंगलवार, मार्च 20, 2012 मार्टी थम्पसन
सामाजिक मिडिया र सामाजिक टेक्नोलोजीहरू अब कम्पनीहरूले कसरी कारोबार गर्छन् भन्ने अभिन्न अ are्ग हुन्। यो पूर्ण रूपमा मिल्दोजुल्दो छ र हाम्रो मार्केटिंग प्रयासहरूमा एकीकृत भएको छ। डिजिटल मार्केटरहरूले सामग्री, SEO, वेबसाइट अप्टिमाइजेसन, PR बारे कुरा गर्न सक्दैनन्। ग्राहकहरू, चाहे उनीहरूले यो बुझे पनि वा महसुस गरेनन्, अब कर्पोरेट सेटिंग्स भित्र खेल्ने पूर्ण रूपमा नयाँ भूमिका छ। तिनीहरू मौलिक रूपमा फरक भूमिका खेल्छन् धेरै रणनीति बजारहरूले मौनको पर्खाल पछाडि सुरक्षित गरिएको एक पटक।
हामी बजारका रूपमा सोच्न सक्दैन "सामाजिक हुनु"हाम्रो अन्य गतिविधिहरू भन्दा केहि अलग भनेर।
यो सामाजिक वास्तविकता अब अर्को चरणमा गइरहेको छ। संगठनहरूले अब उनीहरूको प्रयासमा केन्द्रित छन् कसरी उनीहरू आन्तरिक सुधार गर्न सक्दछन् सामाजिक सहयोगको नयाँ गतिशीलको फाइदा लिई।
ईआरपी, सीआरएम, मार्केटि auto स्वचालन, र अन्य क्षेत्रहरूमा भएका प्रगतिहरूजस्तै, सामाजिक व्यवसाय पनि अर्को शान्त क्रान्ति हो, यो बिस्तारै बिस्तारै, अरूमा चाँडो हुँदै जान्छ।
सामाजिक व्यवसायको अर्थ के हो भन्ने बारे बहस, र के मूल्य "यो" प्रदान गर्दछ, यदि कुनै छ भने, केही सर्कलमा rages। तर मेरो विचारमा, यसले अर्को शान्त क्रान्ति प्रतिनिधित्व गर्दछ। हामी एक दिन उठेनौं र IBM, SAP, Oracle, Salesforce, र अन्य फेला पार्‍यौं, तुरुन्तै निर्माण गरिएको, तैनातीको लागि तयार। यी उद्यमका खेलाडीहरूलाई मात्र सोध्नुहोस्, र उनीहरूले धेरै बाध्यकारी कथाहरू भन्नेछन् किन सामाजिक अर्को ठूलो चीज हो। तिनीहरूले सामाजिक सहयोगलाई केही राम्रोको रूपमा अंगालेका छन्। मेरो आशा यो हो कि हामी सबैले यस अवसरलाई थप उद्यम मान मात्र वितरण गर्नका लागि प्रयोग गर्न सक्दछौं, तर नयाँ परिदृश्य प्रदान गर्नका लागि जटिल मानव अन्तर्क्रियाको बारीकियोंलाई मनाउन सकिन्छ। हो, म गिक्सको शक्तिमा विश्वास गर्दछु।
ती व्यवसायहरूले यी प्रयासबाट सर्वप्रथम लाभ लिन सक्ने ठूलो अंशले उनीहरूलाई धन्यवाद दिन सक्दछन् जसले उनीहरूको ग्राहक सेवा र समर्थन, मार्केटि, र अन्य कार्यात्मक क्षेत्रमा ठीकसँग समाजिक गतिविधिहरू राखेका छन्। यसमा ती सामाजिक सामूहिक फोरमहरू, सेवा र समर्थन टोलीहरू, मजबूत ज्ञान प्रबंधन प्लेटफार्महरू, र सामाजिक सीआरएम को धारणा लिएको छ, र वास्तवमा मा निर्माण मा ती महत्त्वपूर्ण लगानी गरेका छन्। के सामाजिक व्यवसाय यी प्रयासहरूको एक रिहास हो? मलाई लाग्छ कि उत्तर होईन, तर धेरै कुरा सिकेका छन् र प्राय जसो उद्यम सामाजिक सहयोग जस्तो देखिन्छ त्यस्ता प्रयासहरूका लागि bणी हुनेछ।
त्यसो भए तपाईको व्यवसायलाई के हुन्छ? के तपाईं एक एकीकृत मार्केटिंग रणनीतिका लाभहरू पूर्ण रूपमा अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ जुन बुद्धिमान सामाजिक घटकहरू समावेश गर्दछ? यसको सामाजिक विचार हुनु भनेको के हो?
टैग: समुदाय म्यानेजेमेन्टDK New Mediaमार्टी थम्पसनसामाजिक व्यवसायसामाजिक संजाल
मार्क्स 23, 2012 मा 9: 55 PM
मलाई लाग्छ कि हामीसँग हाम्रो कर्पोरेट पदानुक्रम सामाजिक व्यवसायमा समायोजन गर्न धेरै वर्षहरू छन्। हामी अझै उत्पादन लाइन प्रक्रिया मार्फत आन्तरिक विभागहरू विकास गर्दैछौं जब वास्तविकता यो हो कि सबै विभागहरूले ब्रान्डको प्रभावलाई सामाजिक मिडियामा प्रभाव पार्छ - नेतृत्वदेखि सामाजिक, मार्केटि .सम्म ... हरेक कर्मचारीले भूमिका खेल्दछन्। दुर्भाग्यवस, त्यो हाम्रो पावर रूखहरू कसरी संरचित हुन्छन् भन्ने छैन, यद्यपि। हामी आफूलाई चाहिएको जानकारीबाट सिलोअर्ड हुन जारी राख्छौं ... र चाहन्छौं!
त्यहाँ पुग्न रमाईलो हुनेछ, यद्यपि!